‘म पारीबाट हेर्दै थिए डुंगा पल्टिएपछि नदीमा त हाम फालेको हुँ तर धनसरालाई बचााउन सकिँन’ – My Blog
No Comments on ‘म पारीबाट हेर्दै थिए डुंगा पल्टिएपछि नदीमा त हाम फालेको हुँ तर धनसरालाई बचााउन सकिँन’
काठमाडौ । आफ्ना सन्तानलाई खोप लगाउन गइरहेका महिला र उनका साना सन्तान चढेको डुंगा दुर्घटना हुँदा हराएकाहरुको खोजी अझै जारी छ । गाउँमा शोक छाएको छ । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका जाने क्रममा कर्णाली नदीमा डुंगा दुर्घटना हुँदा केही हराएका छन् भने केही घाइते भएका हुन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय सुगराखल कैलालीका अुनसार हराउने कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका ३ बस्ने २० वर्षीया उर्मिला सलामी मगर, उनका १० दिनको बच्चा र त्यही ठाउँमा बस्ने २० वर्षीया पार्वती थापा छन्। त्यस्तै घाइते भएकाहरुमा मोहन्याल गाउँपालिका ३ बस्ने १९ वर्षीया धनसरा सलामी मगर र उनकै एक महिनाका छोरा कर्ण सलामी छन्। घाइतेमध्ये गम्भिर अवस्थामा रहेकी धनसराको पनि निधन भएको छ । छोरा सामान्य छन्।
आइतबार दिउँसो १२ बजे कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–३ का प्रेम सलामीमगर र श्रीमती धनसरा घरबाट छोरा कर्णलाई खोप लगाउन भनी हिँडे। उनीहरुलाई सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–४ बिजौरा पुग्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि डुंगामा सवार भएर कर्णाली नदी तर्नुपर्छ।
पारी जाने १७ जना भएकाले सुरुमा प्रेमसहित ७ जना काठको डुंगा चढे। उनीहरु पारी पुगेपछि बाँकी १० जनालाई लिन डुंगा फर्कियो, जसमा प्रेमकी २२ वर्षीया पत्नी धनसरा र छोरा पनि थिए। उनीका साथमा एक गर्भवती, ४ महिला, २ अन्य शिशु र तीन पुरुष थिए।
सबै सवार भएपछि चालकले डुंगा पारीतर्फ खियाए। तर अचानक कर्णालीको भेल बढ्न थाल्यो र डुंगा पल्टियो। ‘म पारीबाट हेर्दै थिए। डुंगा पल्टिएपछि नदीमा त हाम फालेको हुँ तर धनसरालाई बचााउन सकिँन’ प्रेम सलामी मगर भन्छन्, ‘बगेर तल पुगिसकेका आमाछोरालाई वारीबाट एक किशोर आएर उद्वार गरेका थिए।’ तर घाइते भएका दवैमध्ये छोरा कर्ण मात्रै बाच्न सफल भए। श्रीमती धनसरा भने प्रेमलाई छाडेर सदाका लागि गइन्।
डुंगामा सवार अन्य ५ जना पौडेर बाँचेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। तर उर्मिला सलामी मगर, उनको १० दिनको छोरी प्राप्ती र गर्भवती भएर टिटी खोप लगाउन हिँडेकी पार्वती थापा मगर भने अझै अज्ञात अवस्थामा छन्। उनीहरुको खोजी कार्य चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
← शनिवार देखि मेलम्चीमा फेरी बाढीले के के गर्यो ? घरबार विहिन बनाउने क्रम रोकिएन → इजरायल रोजगारीका लागि फाराम भर्न समस्या भयो ? यहाँ छ सजिलो तरिका